June 2016 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
၁။ နေ့တိုင်း အနည်းဆုံး နာရီဝက်ခန့် သင့်ကလေးနဲ့ သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုကို ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ပါ။
၂။ ကလေး ငယ်စဉ်ကစပြီး သန့်ရှင်းရေး ကို နှစ်သက်ပါစေ။ တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေး ဂရုပြု နိုင်ပါစေ။
၃။ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး ကလေး၏ စိတ်တွင်းစကားကို နားထောင်ပေးပါ။ ထောက်ခံအားပေးသည့် ပုံစံမျိုးဖြင့် နားထောင်ပေးပါ။
၄။ ကလေးကို သတိပေးတယ်ဆိုပြီး အနာဟောင်းကို တုတ်ဖြင့်ခဏခဏ မဆွပါနှင့်၊ သတိပေးစကား ခဏခဏ ပြောမိလျင်၊ ကိုယ်ပြောချင်တာပြော၊ သူလုပ်ချင်တာလုပ် ဖြစ်သွားမည်။
‪#‎မူးရင်‬ မရမ်းနဲ့ ~
အလန့်တကြားရွတ်ဆိုမိသော်ငြား၊ကြောက်စိတ်ကြောင့် “ဣတိပိ” ချည်းသာအပ်ကြောင်းထပ်နေ၏။ရှေ့ ဆက်၍မရွတ်နိုင်တော့။ ရွတ်သည်ဆို သော်ငြား၊ ကိုယ့်နား ကိုယ်ကြားရုံမျှသာဖြစ်၏။
"ဖေဖေနဲ့မေမေ ဘယ်သူ့ကို ပိုချစ်"
"ညည်းအမေကို ပိုချစ်တာမလား မညာနဲ့"
"အာ့ဆိုမေးမယ်၊ ဖေဖေက မေမြို့သွားလည်မယ် မေမေက ရန်ကုန်သွားလည်မယ်၊ သမီး ဘယ်ကို လိုက်မလဲ"
ပြောရမှာက အရှည်ကြီး၊ ဘယ်သူမှလည်း ဒီအကြောင်းကို မမေးဘူးဆိုရင် မပြောပါနဲ့။
၁ - စကားများတဲ့ အကျင့်ကို အရင်မဖျောက်ခင် ကိုယ့်အကြောင်း အကြာကြီးပြောတာမျိုးကို အရင် ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ပြောမယ်ဆိုလည်း ဟာသ ပါအောင် ပြောသင့်ပါတယ်။
၂ - စကားများများ ပြောတော့မယ်ဆိုရင် တစ်ဖက်လူကို မေးခွန်းမေးတာမျိုး၊ တစ်ခုခုသိချင်လို့ ပြောတဲ့ပုံစံမျိုး ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
၃ - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကားပြောတဲ့အခါ ဘယ်လိုခံစားရလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ။
ကျနော်တို့ ငယ်စဉ် ပြေးလွှားရင်း ချော်လဲရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို
ကျနော်ကတော့ အခုထိလည်းကလေးတွေကို သတိထား
ကြည့်မိပါတယ်။ အဓိကကတော့ ငိုရကောင်းမလား၊ မငိုရ
သင်၏ မျက်လုံး အားပြန်ကောင်းပြီး " မျက်မှန်လွတ်တဲ့နည်း "
အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်လာဖြေတာ သုံးခါရှိပြီ၊ မအောင်သေးဘူး။
ဒီတစ်ခါတော့ အောင်ကိုအောင်ရမယ်လို့ အံခဲထားတယ်။
စာမေးပွဲစစ်တဲ့သူ မေးတဲ့မေးခွန်းက အရင်အခါတွေနဲ့ အတူတူပဲ၊
"အမကြီးက ကားကို တစ်နာရီမိုင် ၁၀၀ နူန်းနဲ့ မောင်းလာတယ် ဆိုပါတော့၊ လမ်းတစ်ဖက်က တောင်နံရံ၊ လမ်းတစ်ဖက်က ချောက်ကြီး၊ လမ်းပေါ်မှာက အဖိုးကြီးတစ်ယောက် လဲနေတယ်၊
အိပ်စက်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလွဲယုံကြည် ထားတာ များကို သိရခြင်းဖြင့် အမှန်ကို သိရှိကာ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်ဖို့ အကူအညီရ နိုင်သည်။
အလွဲ ၁ ။
တစ်ညလုံး မနိုးတမ်းအိပ်မှ အိပ်ရေးဝသည်။
အမှန် ၁ ။
ဘယ်သူမှ တစ်ညလုံး မနိုးစတမ်း တစ်လျှောက်တည်း မအိပ်။ တစ်ညလုံး မနိုးစတမ်း နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကြီး အိပ်ပျော်ပါသည် ဆိုသူများသည်ပင် တကယ်တမ်းမှာ တစ်ညကို အခါ (၃၀) လောက် နိုးကြသည်။
တစ်ခါကရွာတစ်ရွာရဲ့အစွန်အဖျားမှာနေတဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူဟာ တောထဲကထင်းခြောက်တွေကိုကောက်ပြီး ခပ်လှမ်းလှမ်းက ဈေးတစ်ခုမှာရောင်းချခြင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုပါတယ်။
သူ့မှာ တော်တော်အသုံးဝင်တဲ့ ထင်းသယ် မြည်းကလေးတစ်ကောင်လဲ ရှိတယ်။ ထင်းကောက်သမားဟာ သူကောက်လို့ရသမျှထင်းခြောက်တွေကို ဒီမြည်းကလေးပေါ်တင် ဈေးအထိသွားပြီး ရောင်းချရလေ့ရှိတယ်။
မော်တော်ကားများ မောင်း၍ သွားလာနေကြရပေသည်။
မော်တော်ကားကို ဘီးလိမ့်အောင် မောင်းတတ်ရုံမျှဖြင့်
ကုသိုလ်များရနိုင်သည် ဟူ၍ ဆိုလိုသည် မဟုတ်ပေ။
မှတ်သင့်တယ်လို့ ထင်တဲ့ သုံးစွဲပုံ တိုစိတိုစိလေးတွေကို နေ့စဉ်လိုလို ရေးတင်သွားဖို့ စိတ်ကူးမိပါတယ် ၊ တစ်နေ့နည်းနည်း ဆိုပေမယ့် စုမိသွားတဲ့အခါ တော်တော်လေးများသွားမှာပါ ၊ တစ်ခါတည်း အပြီး မှတ်မိသွားလိမ့်မယ်လို့လည်း ထင်ပါတယ် ၊ အရှည်ကြီးတွေဆို ရေးပြီးဖို့ အချိန်ကလည်း စောင့်ရဦးမယ်လေ ၊ ကျနော်ကလည်း မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ဝေေ၀ဆာဆာလေး ဖြစ်အောင် မြန်မြန် တင်ပေးချင်နေတာမို့လို့ တိုတိုလေးတွေကိုပဲ သွက်သွက် ရေးတင်လိုက်ရကြောင်းပါခင်ဗျာ..
Khin Haw with Richard Hla.
၁။ ကမ္ဘာအဝေး
ကောင်မလေး iPad ဝယ်လာတာကိုတွေ့တော့ အဖေက လှမ်းမေးလိုက်တယ်။ "သမီး ဆိုင်ကနေ ဒီ iPad ကို ဝယ်ပြီးပြီးချင်း ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ။"
သူမ - "screen မပွန်းအောင် စတေကာ ကပ်ပြီးတော့ အဖုံးလှလှလေး ဝယ်ခဲ့တယ် ဖေဖေ"
အဖေ - "ဟင်.. ဆိုင်က အတင်း ထိုးရောင်းလိုက်တာများလား သမီးရယ်။"
သူမ - "မဟုတ်ပါဘူး။"
" ‪#‎ခု‬ မှ ပဲ ဆ န္ဒ ပြည့် တယ်.. "
မိမိနှင့် အသက်ရွယ်တူ အဖိုးကြီး တစ်ဦးအား ထိုးကြိတ်မှုဖြင့် အသက် ၇၀ အရွယ်
အဖိုးကြီး တစ်ဦးကို ရုံးတင် စစ်ဆေးသည် ။ တရားသူကြီးက မေးသည် ။
" သူ့ ကို ထိုးချင်နေတာ ကြာပြီ...၊ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၄၀ လောက်ကတည်းကပဲ..၊
71. When will the meeting be held?
ဘယ်အချိန်မှာ အစည်းအဝေး ကျင်းပမှာလဲ
회의가 언제 개최됩니까?
72. The meeting is scheduled for tomorrow.
မနက်ဖန်မှာ အစည်းအဝေးလုပ်ဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲထားပါတယ်
회의는 내일로 여정되어 있습니다.
ကျွန်ုပ်၊ချစ်လှစွာသောတပည့်ကျော်များနှင့် အမိမြေကိုကယ်တင်ခြင်း စစ်ဆင်ရေး (မင်းဒင်)
ယိုးဒယားကလူ အိမ်သာတက်ရင်း ကွေးကျိကို မြွေကိုက်ခံရတဲ့သတင်း ဖတ်ပြီးကတည်းက ခုဆို ကိုယ့်မှာ အိမ်သာတက်တိုင်း ဖင်မလုံတော့ဘူး ဖြစ်နေတယ်။
ကိုယ်ကလည်း အိမ်သာတက်ရင် ကြာတတ်တဲ့လူ။
အိမ်သာထဲ တစ်ယောက်တည်း စကားပြောဖော်ကလည်း မရှိဆိုတော့ ဖုန်းလေးယူသွားပြီး ပွတ်တယ်။
ပြသနာက အိမ်က WIFI လေ
(21) I’m not free until 6.
ကျနော်က ၆ နာရီ မတိုင်မီ အထိ မအားပါဘူး
6 시 이후에나 시간니 납니다.
(22) Is one o’ clock okay for you?
၁ နာရီထိုး မှာဆို ခင်ဗျားအတွက် အဆင်ပြေမလား
(23) I am sorry but I can’t.
စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ ၊ ကျနော် မရပါဘူး ( ချိန်းဆိုချက်ပေးလို့ )
ဒီအကြောင်းတွေကိုနားလည် သဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်သူငယ်ချင်းတို့အကောင့် တွေဟာလုံခြုံမှု ရှိလာမှာဖြစ်သလို မသိနားနိုးနဲ့ထိတ်လန့် ကြောက်ရွံ့ နေစရာမလိုတော့ ပါဘူး။
တချို့သူငယ်ချင်းတွေဆို Like မရတာတို့...Security Code တောင်းပြီး FB သုံးမရတော့တာတွေရယ်..Account Hack ခံရတာတွေမကြုံရအောင် ကိုယ့်ရဲ့ Facebook Setting ထဲဝင်ပြီးလုံခြုံရေးစနစ်တွေတိုးမြင့်ထားလို့ရတယ်...